WERARRI ABSINIYAAN GADAA OROMOO ITTIIN CABSITE.. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWERARRI ABSINIYAAN GADAA OROMOO ITTIIN CABSITE..
WERARRI ABSINIYAAN GADAA OROMOO ITTIIN CABSITE..
WERARRI ABSINIYAAN GADAA OROMOO ITTIIN CABSITE DURIIS LAFA GOOTOTA WALLOO IRRAA JALQABE
Warri Absiiniyaa Gadaa Oromoo Cabsuudhaaf biyyoota Awuroppaa wajjiin lafa Oromoo hirachuudhaa /Qooddachuudhaaf/ waliif mallatteeysanii Meeshaa Ammayyaa Gaafaa sanii Qawwee fii Madaafaan fayyadamuun tokko jechuudhaan Ganda Gootota Walloo dhaan Lola Oromoota irratti labsan.
Teedroos Goondareedhaa Meeshaa Ammayyaa Waraana isaa hidhachiiseen Oromoota Walloo Laaftumatti Guyyaa tokkitti waan Cabsu itti fakkaate lola Labsuus Gootonni Oromoota Walloo Eeboodhaan Waranaa isaa kan Meeshaa Ammayyaa Yeroo Sanii Qawwee fii Madaafa hidhate dura dhaabbachuun lola hadhaawaa geggeeysaa turan.
Lola san irratti Gootonni Jajjabee Warqituudhaa Eeboo fayyadamuun Waraana Qawwee hidhate dura dhaabbatanii lola hadhaawaa geggeeysaa turan. Waraana Tedroos hedduu erga gatanii booda Gargaarsi warra Awuroppatiin Warra Absiiniyaatiif godhamu jabaachuudhaan ilmaan Oromoo Gootummaaf isaan dheefa dide hedduu Galaafatanii, Daa’imman Qaqqalanii, Oromoota walloo hedduus Amantii jijjiiruun Garii isaanii Amaareysan.
Gariin Oromoota Walloo Baqatanii Gara suudan galan. Oromoonni walloo baqatanii Gara suudan Cehaniis Qabsoo isaanii Suudaan keeysatti Cimsatuudhaan Warra Maahadistoota Suudaaniin Wajji waliif galtee Uummatanii Meeshaa hanga takka irraa fudhachuun Gara Wallootti deebi’uun Lola Teedroos irratti banan. Lola san irratti Jajjabeen Warqituu Teedroos Isaa Waraana jidduu dhaabbatee dhaadatu harkaan qabanii fuudhuudhaan bakka Anduramaan ja’amtu Geeysanii Morma irraa fuudhanii Gootummaa isaani daran warra Habashaatti Calaqqisiisan.
Tigricha Yohannis Ja’amu kan Oromoota Raayyaa fii Asaboo hedduu Tigreeysuus dhufees Gootonni Ilmaan Oromoo kun Gootummaan dura dhaabbatanii harka itti kennachuu didan. Kanaas akkuma isa kaani Gargaarsi warra adii duuba jiraatuus Gootonni Ilmaan Oromoo kun Gootummaa isaanitiin dura dhaabbachaa turan. Oromoota Walloo fii Raayyaa Gootummaa isaanii waan beekaniif kaleeysaas Warri Absiiniyaa dura isaaniin Jalqabuudhaan Gargaarsa Warra Adiitiin Oromoo Cabsanii Warri habashootaa kun Yoo xiqqaate Jaarraa tokkoof Oromoo Gabroomfatan.
Gargaarsa warra Adiitiin Erga Walloo fii Rayyaa kaan ajjeesanii, Kaan biyyaa baasanii, Kaaniis Humnaan boojihanii booda bifuma wal famkaatuun Warri Absiniyaa Kun Gara Jimmaa Abbaa Jifaaritti dhufan. Jimmatti Aanse kan isaan Weeraran Wallagga. Wallaggatti Aansee Gujiidha. Gujiitti Aansee Boorana, Booranatti Aansee Harargeedha. Werara kana hunda keeysatti Oromoon takka hanga guyyaa ar’atti Jara kanatti harka kennatanii hin beekan. Ajjeefama, Hidhamaatuma Guyyaa ar’a kana gehan.
Akkuma Oromoonni Qabsoo Cimaan Guyyaa ar’aa kana arganii Xiqqo ifa xiqqaa tokko arganitti Weerarri Warra Absiiniyaa Abjuu /Manaama/ Kaleeysa san Dunquqquu keeysa manaamuudhaan Lola bifa kaleeysaatiin wal fakkaatu walloo irratti banan. Ar’a Garuu osoo silaa akkuma kaleeysa Even warri Adiilleen wiin jiraatee Oromoo inuma hin dandahan cabinsa dhuma hin qabne Caban malee. Sababniis Ar’a yeroo yeroo teeknolojii waan taheef Oromoon bakka hunda quba wal qaba, Waliif dirmata, Waliif du’a. Kanaaf ar’a warra Absiiniyaa akka Kalee itti fakkateeti caba irraa hamaa Cabuuf deeman je’eetiin barruu tiyya Xumura.
Barreeysaa fii Qindeeysaan Seenaa tanaa,
Shukrii Mohammed Umaraa ti.
Dubbii Alamuu Simee
“Yaayyaakoo, torbanoota darban wallagga hundarraa geeggeessaa 900 taanuu Adaamaatti qorannoo maqaa shanee jedhuun Alamuu Simeetiin ji’a lama dararamaa turree baane! Amma ammoo maatii keenyaarraa wallaggaa keessa oliif gadi nufacaasan! Hundi keenyayyuu didne mana ta’aa jiira. Siyaasni haaloo namatti bahuun hinsirratu. ODP wallagga keessaa geggeessaa nama dhibba sagal nama tokkoof jedhee dhabuuf deema. Mee afaan nuuf ta’aaaa.”
Tapha Kubbaa Miillaa Obbolummaa #Abbichuu fi #Lammishaagidduutti,Isataadiyeemii Naqamteetti ta’een walqixa tokkoof, tokkichummaan bahaniiru !!!
Isiin lachuu abbaa injifannooti!!
Ummata gammachuun nama garaa isaan gubdu kana laalaa 🤣
Akkanatti shah fah ja’atii garaa gubaa mee…isaan midiyaadhaan Afaan nutti banaa jiraatu